Musharax ka tanaasalay Doorashada Gudoomiye ku xigeenka 1-aad Aqalka sare iyo Sedex Musharax oo ... - iftineducation.com
Musharax ka tanaasalay Doorashada Gudoomiye ku xigeenka 1-aad Aqalka sare iyo Sedex Musharax oo …
iftineducation.com – Musharax u tartmayay Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Aqalka sare ayaa goordhaw xarunta Doorashada ka socoto ka shaaciyay in ay ka tanaasulay in u tartamo wareega labaad ee Doorashada Aqalka sare.
Musharax .Cabdirisaq Cusmaan Xasan Jurille oo helay 6-cod wareegii hore ayaa sheegay in uu go’aansaday in uu ka tanaasulo in uu u tartamo wareega labaad ee doorashada Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Aqalka sare.
Waxaa hada wareega labada ku tartami doona Sedexda Musharax ee ugu cadka badna awareegii hore kuwaa oo kala ah Abshir Maxamed Axmed(Bukhaari), Cabdi Axmed Dhuxulow (Dhagdheer) iyo Maxamud Axmed Mashruuc.
Doorashada ayaana u muuqata mid loo gudbi doono wareega sedexaad, waxaana wareega labaad ku harti doona musharaxii ugu cod yaraada , waxaana ugu dambeyn cod hal dheeri ah ku kala adkaan doono labada Musharax ee isku soo harta.
Waxii Warar ah ee kusoo kordha kala soco Wararkayaga dambe Inxsha Allah